Prof. Shirwac oo ku geeriyooday Muqdisho | KEYDMEDIA ENGLISH
Prof. Shirwac oo ku geeriyooday Muqdisho
Professor Shirwac ayaa si weyn loogu xasuustaa kaalintiisii mutadawacnimada aheyd ee gurmadka abaaraha iyo maareynta xaaladdihii adkaa ee dalku soo maray 30kii sano ee lasoo dhaafay.
MUQDISHO, Soomaaliya – Allaha u naxariistee Prof. C/llaahi Maxamad Shirwac, oo ahaa Guddoomiyahii Guddiga Gurmadka Abaaraha, ayaa xalay xilli danbe ku geeriyooday magaalada Muqdisho, halkoosoo uu ku xanuunsanaa maalmihii la soo dhaafay.
Sida ay KEYDMEDIA ONLINE, u sheegeen xubno ka tirsan qoyskiisa, maanta ayuu qorshuhu ahaa in loo qaado dalka dibaddiisa, si adeegyo caafimaad oo dheeraad ah loogu raadiyo, iyadoo la filayo in aas maamuus qaran leh, loogu sameeyo Muqdisho.
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Xil-gaarsiinta, Maxamed Xuseen Rooble ayaa ka tacsiyeeyey geerida Prof. Shirwac, oo xubin firfircoon ka ahaa dalladda Bulshada Rayidka ah ee Soomaaiyeed, muddana si si xilqaan ah ugu adeegayay umadda gaar ahaan danyarta.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa ku tilmaamay marxuumka halyeeyey ka baxay qaranka Soomaaliyeed, wakhtigiisana u huray u adeeggidda dadkiisa. “Alle waxaan samir iyo iimaan u weydiinayaa qoyskiisa iyo shacabka Soomaaliyeed ee uu ka baxay”, ayuu yir RW Rooble.
AUN, Prof. Shirwac, wuxuu ka mid ahaa dadka fara ku tiriska ah ee waqtigooda u hurayay horumarinta nabadda iyo abaabulka bulshada ee ku wajahan ka jawaabidda xaaladdaha deg-degga ah ee gurmadka loo fidinayo shacabka Soomaaliyeed.
Ergeyga gaarka ah ee Arrimaha Bani’aadannimada iyo Gurmadka Abaaraha, Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, oo sidoo kale ka tacsiyeeyay geerida Prof. C/llaahi Maxamad Shirwac, ayaa marxuumka ku tilmaamay, halgamaa waqtigiisa iyo waayihiisa u huray, u dhaqdhaqaaqidda bulshada, gaar ahaan kuwa nugu.
“Waxaan ehelka, asxaabta, bahda bulshada rayadka ah iyo guud ahaan Shacabka Soomaaliyeed uga tacsiyeynayaa geerida xanuunka leh ee ku timid Prof. C/llaahi Maxamad Shirwac, Allaha u naxariisto, danbigiisa Allaha dhaafo”, ayuu yiri.
Ergeyga, ayaa Madaxweynaha JFS, Xasan Sheekh Maxamuud, ka codsaday in magaca marxuumka la maamuuso, maadaama uu ahaa geyfane u go’ay u gurmadka kuwa gacan qabadka u baahan, wuxuuna xusay in waqtigiisu dhamaaday xilligii loogu baahida badnaa.